Infinix waxay soo bandhigeysaa HOT 7 Isticmaalayaasha inay ku raaxaystaan ​​waxqabadka iyo madadaalada - Abidjanshow.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Infinix waxay soo bandhigeysaa HOT 7 Isticmaalayaasha Isticmaalaya inay ku raaxaystaan ​​waxqabadka iyo madadaalada - Abidjanshow.com
Abidjan, Ivory Coast, 11 Febraayo 2019 - Infinx, tiknoolajiyada casriga ah ayaa bilaabay qaabka ugu dambeeyay ee taxanaha HOT, HOT 7. Infinix waxaa lagu aqoonsanayaa suuqyada soo kordhay iyada oo casriga casriga ah ee qiimaha jaban. HOT 7 ayaa soo bandhigtay madadaalinta taxanaha taxanaha, shaashadda weyn, batari weyn iyo tiknoolajiyada Dirac ee loogu talagalay dadka hadlaya. Tani waa mid la hagaajiyay oo leh qaab ciyaareed aad u fiicnaan leh waxaana laga heli doonaa 60 500 FCFA Qiime Lagu Soo Bandhigay.
Infinx, taxanaha taxanuhu waa khadadka wax soo saarka istaraatiijiga ah. Infinix waxay si weyn u maalgashatay inay ka baxdo xadadka tiknoolajiyada, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​tiknoolajiyadda ugu dambeysa. HOT 7 waxay leedahay shaashadda HD + 6,2 iyo farshaxanka xitaa khibrad iyo sawirro muuqaal oo dheeraad ah. Iyadoo shaashadda "FULL VIEW" neefsashada. Ma noqon doonto mid gabi ahaanba lagu dhexdhigay waayo-aragnimada madadaalada.
Shaashad weyn ayaa sidoo kale macnaheedu yahay isticmaalka tamarta badan. HOT 7 waxay leedahay batari 4000mAh kaasoo bixiya wakhti aan la isticmaalin oo hal mar ah. Looma baahna batteriga dabagalka dibadda.
Saacadaha cajiibka ah waa kuwo xusuusinaya. Tifaftirka sawirku wuxuu markasta ahaa barta casriga ee casriga Infinix. HOT 7 waxay leedahay qalab qaboojiye ah oo leh 13 megapixel oo dheeraad ah. Iyada oo ficilka farge-fareenta ee f / 1.8, rikoodhku waa mid aad u nadiif ah iyo tayad ka wanaagsan. Aynu ku darno tiknoolajiyadda maqalka 3D DIRAC kaas oo lagu soo dhaweeyay dadka isticmaala qaabab hore sida HOT 6. Waxay u ogolaataa tayada maqalka ku haboon ee dhageysiga gudaha iyo dibedda iyada oo aan loo baahnayn dhagaxyada madaxa.
Wakaaladaha Smartphones waxay ku jiraan macluumaadka gaarka ah da'da dijitaalka, waana muhiim inaad isticmaasho hab ammaan ah oo haboon oo loogu talagalay sirta xogta. Infinix had iyo jeer waxaa loogu talagalay inay dadka siiso adeegyo ammaan ah. Tilmaamahan waxaa sidoo kale lagu hirgeliyay HOT 7 iyada oo loo marayo akhristaha sawirka iyo aqoonsiga wajiga oo kaliya halbeegyada 0,5 oo keliya, adiga iyo macluumaadkaaga waa ammaan.
La aqoonsan yahay naqshadaheeda, Infinix wuxuu soo bandhigayaa HOT 7 afar nooc: Midabka madow, buluug, buluug iyo moraal. Infinix HOT 7 waa doorasho heer fasal ah oo loogu talagalay waayo-aragnimo culus ee madadaalada. Macluumaad intaas ka badan, fadlan booqo bogga Infinix ee rasmiga ah http://www.infinixmobility.com/
Qaababka Infinix HOT 7:
Shabakadda: 3G / 2G
OS: AndroidTM 8.1 / AndroidTM 8.1 (Wargeyska Go)
Screen: 6.2 "HD + qiyaas
Habdhaqan: MT 6580 P
Cabbirka: 155.4 * 75.9 * 8.4mm
Kaamirada hore: 8MP FF leh flash; Qalabka gawaarida: 13MP laba sawir qaade ah
Ku saabsan Infinix:
Infinix waa nooca casriga ah ee casriga ah ee Kooxda Hawl-gaabinta ee loogu talagalay dhalinyarada raadinaya hab nololeed oo ku xiran. Abuuritaanka 2012, Infinix waxay ku hawlan tahay soo saarida casriga casriga ah ee casriga ah iyo naqshadeynta casriga ah ee keenaysa qaab nololeed oo u dhexeeya tiknoolajiyada sare iyo qaab nololeedka. Iyada oo loo marayo isdhexgalka maalinlaha ah, alaabooyinkan ayaa hadda ah qayb muhiim ah oo ka mid ah qaab nololeedka dhalinyarada ee heer caalami ah. Hadda suuqyada Infinix suuqyada 4: SOMALI, XUSUUS, HOT S iyo HOT dunida oo dhan ee Yurub, Afrika, Latin America, Bariga Dhexe iyo Aasiya. Iyada oo maskaxda lagu riixo xudduudaha, casriga Infinix waxaa loogu talagalay gaar ahaan dhalinyarada taagan iyo aduunka maanta.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/lifestar/tic/infinix-lance-le-hot-7-permettant-aux-utilisateurs-de-profiter-de-performances-et-divertissements